SOMALITALK - FAALLOOYIN
Faallooyinka Caddadka 5aad Ee Wargeyska Dalka
Dadweynuhu Ma Sii Xamili Karaan Inay Qabqablayaal Af Duub U Sii Haystaan?
Afrikaanku Way Inoo Hiiliyeen ee Inaguna, Aynu Dalkeena U Hiilino
Dareenka Dawladda iyo Dibindaabyada Danaystayaasha
Wargeyska Dalka oo ah todobaadle maalin kasta oo Sabti ah soo baxa, oo badiba gaadha gobolada iyo degmooyinka Dalka Soomaaliya ayaa caddadkiisii ugu dambeeyey oo ahaa tirsigii Shanaad, saddex faallo ka qoray siyaasadda guud ee dalka iyo arrimaha todobaadkii ugu dambeeyey ku soo kordhay siyaasadda dalka. Waana sidan:
Iyadoo ay dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya ku hawllan tahay sidii ay waajibaadyadeeda qaran u gudan lahayd oo ay tilaabooyin wax ku ool ah uga qaadi lahayd amni-darrada iyo nidaam-darrada dalkeena ka taagan ayeey kooxo fara ku tiris ah oo dulmi iyo qalalaase isu bahaystay oo nabadda iyo deganaanshaha ku xajiimoodaa u soo ban-bexeen sidii ay nabadda iyo horumarka ay dawladdu waddo u carqaladayn lahaayeen. Masuuliyiin horay loogu magacaabay inay madax ka noqdaan wasaarado muhiim ah oo loogu talo galay inay siyaasadda dawladda ku hawl galaan ayaa qas iyo dhibaato iyo inay dawladda curyaamiyaan u tafa-xaytey. Taasi waxay ku tusaysaa inay raggaasi doonayaan inay ummadda Soomaaliyeed dhibka daashaday ee ay 15ka sano ku soo jirtey aysan ka bixin oo ay af duub iyo lugooyo dadka iyo dalka u sii haystaan.
Shir ay dhowaan yeesheen ayeey ka soo saareen in Muqdisho laga sameeyo banaan bax lagu cambaaraynayo dawlado aynu saaxiibbo nahay oo dhibaatada dadkeena maanta haysata wax ka qabashadeeda u soo gurmaday.
Haddii ay ciidamo nabad ilaalineed oo dalkeena soo gala diiddan yihiin, waxay taasi la macno tahay inay diiddan yihiin nabad iyo dawladnimo dhulkeena hooyo ee bur-buray ka hir gasha.
Waayo? haddii ay Soomaaliyi tashan karto, oo wixii horay uga xumaaday wax ka qabashadeeda u midoobi lahayd oo ay iyagu waxii lagu bartay ka hanuuni lahaayeen, ciiddan shisheeye iyo aalado kale oo loo baahan lahaa ma jireen. Waxay qaran-dumisku doonayaan inay weli sii wadaan siyaasadaha fashilka ah ee ay dalka 15ka sano ku caburinayeen, oo ay fawdada iyo kala dambayn la’aanta geyigeena ka taagan, si iyaga u gaar ah uga faa’iidaystaan oo ay maatada iyo dadka jilicsan ee dawladnimada iyo amniga u baahan ku sii cariigsadaan, sidoo kalena ay danoohooda gaar ahaaneed ilaalinteeda jiritaanka dalkeena u baabi’iyaan.
Taasi ma aha mid maanta u suuroobaysa. Waayo go’aamadoodii ka dib, wax garad Soomaaliyeed oo ka daalay qabqablaynta fawdada iyo hagardaamada xambaarsan ayaa Halkii ay ku shireen u daba maray oo si geesinimo iyo waddaninimo ku dheehan tahay u baahiyey inay raggaasi wadaan qalaalse iyo dumin dawladeed oo aan wakhtigan xaadirka ah Soomaaliya looga baahnayn.
Ragaasi ma aha niman doonaya inay doonistooda si nabad ah ku meel mariyaan, waxayse raadinayaan inay shacabka Soomaaliyeed ee amniga, kala dambaynta iyo dawladnimada harraadka kulul u qaba danahooda cirka ku laalaan, oo waxba, kama jiraan ka soo qaadaan. Dhawrka nin ee nabadda ka fallaagoobey ma aha wakiilo metela dad ka mid ah shacabka Soomaaliyeed, waxayse yihiin shaqsiyaad ku bahaloobey bur-burkii dalkeena ka dhacay oo haddii ay dawladdu awooddeeda fulineed dalka ka hir geliso waayaya wixii ay u barteen ee ay sharci darrada ku haysteen.
Dadweynaha Soomaaliyeed ma haystaan Airport ay wixii ka soo degaba cashuur aan sharci ahayn ka qaadaan!. Ma haystaan xaafado ay ku amar-ku-taagleeyaan oo wixii ay doonaanba ka fuliyaan. Shacabka la dulmay ee lagu xad gudbey ma laha maleeshiyo ka amar qaadata oo ciddii ay neceb yihiinba dhegta dhiigga u dari karta. Dadweynuhu waxyaabo dunida ka caggan oo mamnuuc ah kama baayac mushtaraan. Sifooyinkaas oo ay kuwa nabadda iyo dawladnimada diiddani leeyihiin, assii aysan dadka caadiga ahi lahayni waxay ummadda Soomaaliyeed ku dhaqaajiyeen inay fahmaan inaysan iyaga iyo danaystayaashaasi isku dan iyo isku ujeeddo ahayn.
Xaq bay wax garadka reer Muqdisho u lahaayeen markii ay shirkii qabqablayaasha ku tilamaameen mid aan dan qaran iyo dan Soomaaliyeed ku jirin, balse ay ku tilmaameen inuu ahaa mid nidaamka dawladnimo oo danta dadku ku jirto lagu halgaadayey.
Haddii ay dadweynaha Muqdisho, ka gilgisheen inaysan danaystayaal aan waxba heshiis ku ahayni dantooda wadin, waxaynu dareemi karaa in la gaarey xilligii ay dadkeena iyo dalkeenu ka gudbi lahaayeen xaaladda adag ee ay muddada dheer ku soo jireen ee ay dawlad la’aantu dhalisay.
Shacabku waa inaysan ka daalin diidmada iyo ka hor imaanashaha ciddii danohooda lid ku ah ee u hanqal taagaysa inay af duub u sii haystaan.
Waxaad mooddaa in la gaarey goortii ay dawladnimadii Soomaaliya iyo nabaddiiba dhulkeena ku soo noqon lahaayeen, oo dadku waxay u kala baxayaan nabad-diid iyo nabad-doon aan is arki karin, oo aan isku ujeeddo iyo isku hadaf midna ahayn.
Wax garadka Soomaaliyeed ee sida geesinimada leh ugaga hor yimid fallaagada nabad-diidka ah, waxay waa’ cusub u fureen danaha siyaasadeed ee ummadda Soomaaliyeed, waana in lagu taageeraa dhaqdhaqaaqa nabadeed iyo midka dawlad jacayl ee ay dareenkooda caafimaadka qaba ku muujiyeen. Waxaa la hubaa inay dadweynahu ku baraarugsan yihiin danta iyo ujeedada dhabta ah ee afarta qof ee marba qol ku shiraya ee danta ummadda inay qaribaan weli hunguri ka sii qaba.
Hunguri wedkii ma arko, wax walbaana, mudday leeyihiin. Soomaaliyi maanta waxay haysataa hogaamiyaal sare oo aan danta ummaddooda, cidna uga waabaynayn oo inay dawladnimo iyo nabad Soomaaliya ka hirgeliyaan ku dhaata, oo weli jidkii xaqa ahaa ku taagan. Sidoo kalena madaxda Soomaaliyeed ee maantu waa kuwo sirta iyo saaca nabad-diidka si quman u fahamsan, oo khiyaamada danaystayaasha ganafka ku dhufan kara. Shacbi weynaha Soomaaliyeed ha u fekeraan si heer qaran ah. Ha ka munaaqishoodeen afarta nin ee nabadda diiddani waxa ay Soomaali u soo wadaan. Feker xalaal ah oo qaranimo ku qotoma ha kaga hor tagaan, kuwa xasillooni iyo degenaasho dalkeena ka dhaca ku xajiimoonaya.
Sharciga dalka u yaalla iyo go’aamada ay Golayaasha dawladdu isla gaadheen iyadoo la qadarinayo oo lagu socdo ayeey madaxda sare ee dawladdu ku hawllan yihiin sidii nabad iyo deganaansho dalkeena loogu soo dabbaali lahaa. Dad baa wadiiqooyinka guusha iyo istiraatiijiyada dawladdu xal u helidda dalkeena u xariiqday, u fasiraya si khalad ah oo aysan cid ku fekeraysaa jirin. Dawladdu si ay u noqoto dawlad adag oo awood u leh inay sharciga iyo kala dambaynta uu dalku u baahan yahay gacan buuxda ku dhigto waxay daw u leedahay inay dejiso qorshayaal ay ku fuliso wakhti ku talo gal leh. Kaas oo haddii aysan awood u lahayn ay la kaashan karto beesha caalamaka iyo wadamada Soomaaliya saaxiibada la leh oo ay qaarkood haddaba dareenka wanaagsan shirkii Midowga Afrika inooga muujiyeen.
Dawladda Federaalka KMG ahi, iyadoo doonista ummadda Soomaaliyeed ka ambaqaadaysa, isla markaana baahida nabad gelyo xumo ee dalka iyo dadka ku gaamurtay ka shidaal qaadanaysa aysan marnaba ka daalin sidii ay adduunka iyo Soomaaliduba isaga kaashan lahaayeen xal u helidda Soomaaliya oo furdaaminteeda in badan lagu wareeray.
Midowga Afrika oo ah urur ay waddamada Afrikaanka ahi isku bahaystaan oo uu fadhigoodii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Sirti ee wadanka Liibiya oo uu Raysal Wasaaraha Soomaaliya ka qayb qaadanayey ayeey faallo iyo dood ka dib waddamada Midowga Afrika isla qaateen in aan Soomaaliya xaaladda ay ku jirto lagu sii eegan karin.
Waxay guddoomiyeen in marka hore xayiraadda uu Golaha Ammaanku Xagga Hubka Soomaaliya ka saaray laga qaado, si ay ciidamo Midowga Afrika ka tirsani badbaadinta iyo sharci ku soo dabbaalida Soomaaliya gacan uga siiyaan dawladda Federaalka KMg ah si ay shacabkeeda si ay shacabkeeda amni iyo kala dambayn ugu hor-seeddo.
Taas Waxagaradka Soomaaliyeed waxay ku tilmaameen guul iyo lib Soomaaliya oo dhan u soo hoyatey. Waxaynuna garan karaa inay walaaleheena Afrikaanku inoo hiiliyeen oo inay dalkeena u soo gurmadaan isku waafaqeen. Maxaa haddaba, dadka Soomaaliyeed la gud-boon? Ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waa inay sharafkooda iyo karaamadooda u hiiliyaan oo noloshooda ka fekeraan, mustaqbalka dhallaanka soo korayana si wadajir ah uga wada shaqeeyaan. Xaqiiqdu waxay tahay inay shacbi weynaha Soomaaliyeed rabitaan dawladnimo iyo nabadgelyo waddankooda ka dhacda, oo ay dawladdoodu guulaysato dhiigooda iyo naftoodaba u hurayaan. Waxaase jira kuwo weli u sii hanqal taagaya inay dhibaatada dadka haysata ku hor taagnaadaan, si aysan dadku dhibaatada dawlad la’aaneed ee muddada haysatey uga bixin. Kuwani waa tiro aad u yar oo haddii shacabku ku gadoodo cagta la marin karo.
Dadweynuhu ha kaceen, Ha fekereen, qaran-diidyada ha iska qabteen, Iyaguba nolol uma ogolee, waa inay si qayaxan runta wejiga uga saaraan oo u sheegaan xaqiiqda lama dhaafaanka ah oo ah inaan dhibaatada laga baxayn Dawladda sida dhibka badan u dhalatay taageero hiil iyo hoo’ba leh lala garab gelin.
Ummadda Soomaaliyeed waa inay garab is taagaan madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha shirkii labada sano iyo badhka socdey looga dhex doortay inay leeyihiin sifayaal ay wax kaga qaban karaan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku ragaadey.
Afrikaan iyo Carab midna ina ixtiraami maayo haddii aynaan dalkeena wax muuqda oo horumar nabadeed iyo dawladnimo ku qotoma ka hir gelin. Waa inuusan wakhtiga inaga dhumin danayste ku tumashada danta dadka ay ugu badiso. Fikirka qalloocan ee uu dadka iyo dalka ku ciqaabayo ee danihiisa ku hilan, waa inay shacabku ku diidaan. Waxaa hubaal ah, haddii aynu dawladdeena la halgano oo guntiga dhiisha iskaga dhigno sidii aynu magaceenii iyo sharafkeenii u soo ceshan lahayn, inaan wakhti yar guullo wax ku ool ah oo ay ubadkeenu u aayaan gaadhi karo. Danaystayaasha bur-burka dalkeena ku mamayna iska qaban karo, oo aynu adduunyada tusi karro Soomaali wada jirta oo geyi nabad iyo barwaaqo ah ku nool oo uu calankoodii shanta gees lahaa ka kor babanayo.
W.Q. Hon. Ibrahim Mohamed Deeq
Wasiir Dawlaha Wasaaradda Warfaafinta
Adduunyada marka ay dawladi waddan u dhalato caalamka kale wax kasta oo waddankaas ku saabsan, ay ku caawinayaan, uga baahdaan, ama xiriir kasta oo ay la yeelanayaan, waxay kala xiriiraan xukuumadda markaa jirta oo ka kooban madaxweynaha iyo golaha wasiirada. Waayo xukuumaddu waa awoodda keliya ee sida rasmiga ah dalkeeda iyo dadkeeda u metesha. Sida qodobka 39aad ee axdiga ku cad: Madaxweynuhu waa astaanta midnimada qaranka, waa Madaxa Dawladda. Waa Taliyaha guud ee Ciidamada Qalabka sida. Sidoo kale, sida qodobka 48aad ee Axdigu qeexayo Raisul wasaarahu wuxu sharciyan mas’uul ka yahay horumarinta, isu duwidda, kormeeridda, iyo maamulka guud ee Dawladda. Wuxu wasiirka koowad dejiyaa qorshaha arrin kasta, dhinac maamul, dhan nabad gelyo iyo dib u heshiisiin iyo waana hogaamiyaha xukuumadda oo aysan cid kale oo aan golihiisa wasiirada ahayni la’aantiis shaqadiisa fulin karin.
Aqalka Baarlamaanku waa abuuraha ama dhaliyaha hogaamiyaaysha qaranka, waayo, iyagoo ka war qaba awoodda uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Axdiga KMG ahi siinayo ayeey ikhtiyaar u leeyihiin cidda ay u dooranayaan hogaamiyaha dalka ugu sareeya. Sidoo kale Waxay ansixiyaan oo inay ummadda u adeegaan cod ku ogolaadaan golaha wasiirada oo uu Ra’isal wasaaruhu ugu sareeyo. Isla markaana ah awoodda fulinta. Intaas oo aasaakii lagu shaqaynayey ah wax dhisa golaha Barlamaanka. Wixii intaas ka dambeeya shaqada golaha Baarlamanku waxay ku kooban tahay inay la xisaabtamaan Ra’isal Wasaaraha iyo golihiisa Wasiirada ee ay u ogaalaadeen inay ummadda Soomaaliyeed metelaan oo u shaqeeyaan.
Haddii ay sharciga ku xad gudbaan iyo haddii ay shaqadooda ka soo bixi waayaanba marnaba, sharcigu uma ogola inay shaqada xukuumadda iyagu qabtaan oo abuuraan tafaraaruq iyo nidaam xumo aan dalku xambaari karin. Waxayse hawshooda qaran tahay inay xukuumadda digniino u jeediyaan, isla markaana haddii ay xal ka gaadhi waayaan kalsoonidii ay shalay siiyeen kala noqdaan. Taas oo ku iman karta mashruuc dalka iyo ummadda loogu danaynayo oo aysan awood balaadhsasho, iyo xad gudub wax lug ah ku lahayn. Isla markaana doonista inta badan ee Xubnaha Baarlamaanku isku raaceen.
Baarlamaaku waa hooyadii dhashay dawladda Soomaaliyeed oo dhan, sidaa darteed kuma habboona inuu habsami u socodka hawlaha dawladda sallid ku noqdo oo uu mar kasta muran iyo dood aan macno ku fadhiyin xukuumadda ku furo. Waxaase looga fadhiyaa inuu u fekero hannaan ay qaranimo iyo waddaniyadi ku dheehan tahay oo dadka la metelayo loogu danaynayo.
Dawladda Federaalka KMG ah ee hadda awoodda siyaasadeed ee dalka loo igmaday, Soomaali oo dhani way ka dheregsan tahay dhibaatadii iyo dadaalkii aan loo kala hadhin ee lagu soo dhisay. Dadka Soomaaliyeedna beled iyo Baadiye hanaankii ay dawladda Federaalku ka dhalatay way ka soo wada qayb qaateen. Qolo kasta iyo jilib kasta waxaa madasha shirka u joogey Ergo ay iyagu soo xusheen oo danohooda u ilaalisa. Markii Golaha Shacabka la xulayey, Beel waliba ninkii ay door bidaysey ayeey u wakiilatay inuu Baarlamaanka Kursigii ay ku lahaayeen u fadhiisto. Sidaas oo ay beesha Caalamka iyo ururada nabadda iyo horumarka ka shaqeeyaaba goob joog ka ahaayeen ayeey dawladda Federaalka KMG ahi ku dhalatay. Marka, ma jirto cid maanta xaq laga hayo iyo cid xad gudub xagga awood qaybsiga ah tabanaysa.
Haa, Shaqsiyaadka fara ku tiriska ah ee dawladda ka falaagoobey waxay hamigooda iyo dareenkooda, gaar ahaaneed iska weeydiinayaan dheeftii ay dhagarta dadka ku qabeen xilligii aanay Dalkeena Dawladda sharciga ahi ka jirin; oo maxay tahay?. Dawladdan inoo dhalatay waxay u arkaan mid ay hogaaminayaan madax daacad ka ah inay maanta Soomaali dhibka ku gaamurey ka saaraan oo dawladnimo iyo amni geyigeena ka hir geliyaan. Markaasay shaqsiyaadkii dhibaatada dadkeena haysata dheefsan jirey muraayadda gadaasheeda ka arkeen iyagoo awooddii ay ku shaqaysan jireen farohooda ka sii baxayso, oo ay awooddii dalku gacanta Dawladda ku sii ururayso. Shaki kuma jiro inay dadkeenu kahanayaan marxaladda maanta aynu ku jirro.
Marka miyaa laga yeelli karaa inaynu bur-burka waddankeena, danaha ashqaastaas ku ilaalino. Waa maya. Runtu waxay tahay, iyadoo la yaqaan baa duruufta ina haysata darteed, masiirkii Soomaaliyeed inay ka arrimiyaan oo Wasiiro iyo Xildhibaano noqdaan loo ogolaaday; wayse u cuntami weydey oo inay qaranka Soomaaliyeed ee dib u dhashay Isbaaro u dhigtaan bay ka door bidayaan wixii ay ummadda Soomaliyeed u quurtay. Soomaalida uma muuqato wax intaas ka badan oo ay u quudhi karaan. Weliba intaas maslaxad iyo madax salaax bay dawladdu la garab taagan tahay. Nasiib xumase inay dib u dhiska iyo nabadaynta dalkooda ka qayb galaan lagu kari waa, oo waxay ku sifoobeen abeesadii Farta loo taagey e Fanaxa ku booddey!.
Waxaa dhab ah inay ku hungoobayaan damaca iyo daandaansiga ay shacbiga Soomaaliyeed ku hagardaamaynayaan iyo dadaalka ay ku raadinayaan dib u dhaca iyo horumar la’aanta bulshada. Dadka Soomaaliyeed way yaqaaniin Fallaagada fara ku tiriska ah ee Dawladdan xididdaysatay ee awooddeeda dalka oo dhan ku fidisay ka daba qaylinayaa sumcad ahaan kuwa ay yihiin. ahaan iyaga Qudhoodu inaysan waxba heshiis ku ahayn oo carqalad iyo inay bulshada dhexdeeda qalaalseeeyaan isku deyayaan la og, lagse yeeli maayo.
Midna, midka kale waxba uma ogola, Indho Ma leh, Wax lagu dayo, Dhego Ma Leh, Wax lagu Maqlo, Nabaddana dan kama laha. Waxay ku marmarsoonayaan Dawladdu Xamar ha soo degto iyo haddallo ujeedada ay ka leeyihiin illamaha yar-yar ee Muqdisho ku dhaqani waxa ka dambeeya fahmi karaan. Haa, Dawladdu iyadaa, kuwaas Muqdisho u dhaanta, oo waxay qorshaysatay inay tagto iyadoo amniga dadweynaha kafaala qaadi karta. Haddii ay Muqdisho magac iyo mansab la jecel yihiin, maxay sida ay hadda tahay ugu dhaami waayeen, illayn nabadgelyo la’aanta caasimadda Soomaaliya ka jirta iyagaa sabab u ahe!. Xamar qiimo gaar ahaaneed ayeey Soomaaliya u leedahay waayo waa muraayaddii Qaranka Soomaaliyeed, inay goob ammaan ah oo lagu shaqayn karo noqotaana, wuxuu qiima dheeraad ah ugu fadhiyaa dhamaan shacbi weynaha Soomaaliyeed ee dawladnimo iyo amni ay ku naaloodaan u baahan. Sidaa darteed, haddii ay jirto cid magaalada Muqdisho cadow ku ahi, waxay kuwaasi noqonayaan kuwa durba ka falaagoobey dawladda ay xubnaha ka yihiin ee danaha gaar ahaaneed, fawdada dalkeena ka taagan ku qaba.
Si kastaba ha ahaatee, markii ay muddo dadweynaha reer Muqdisho ee nabad iyo nidaam hir gala oo ay dawlad Soomaaliyeed gadh wadeen ka tahay doonaya ay ku kicin waayeen arrimaha aynu ka soo haddalay waxay haddana miciin bideen inay faafiyaan inay dawladdu hub la soo degtey oo ciidan dhisayso. Waa yahay, Haddii aysan dawladi Ciidamadii amniga iyo kuwii qarankaba dhisin hawshaas ciddee yaa qabanaya. Ma iyagaa daboolaya baahida, mise waxay doonayaan inay dawladdu ahaato xukuumad ay ka xoog badan yihiin oo wixii ay doonaanba ku samayn karaan. Dawlad aan lahayn awood ciiddan oo ay fulinta shuruucda dalka u isticmaashaa, soow ku dambayn mayso sidii kuwo hore loo soo dhisay oo iyagoon ummaddii ay metelayeen waxba u qaban, karti xumo iyo qorsho la’aan cidlada ugu bas beelay!.
Inay dawladdu ciidamadii amniga iyo kuwii difaaca qaranka dhisto oo u hesho hub ay si sharci ah danaha dalka ugu difaacaan, waxay tahay tallaabo sharciga iyo xeerarka dalka u yaalla ku qotoma oo aysan cidina geed ay ku gabato uga dhigan karin. Sidaa darteed, wax garadka Soomaaliyeed waxay dhiiri gelinayaan inay dawladdu dhismaha cududdeeda Milateri ahmiyadda koowaad siiso, si ay u yeelato awood ay qalalaasaha jira iyo midka inuu yimaaddo laga yaababa gaashaanka ugu daruurto.
Dawladda Federaalka KMG ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay mar kasta door weyn siinaysaa oo ku shaqaynaysaa rabitaanka Shacbi Weynaha Soomaaliyeed ee ay sida sharciga ah u metesho. Kumana hawlana, mana geydo inay ummadeeda dibindaabyo iyo dhibaato ku sii eegato. Sidaa awgeed Shacbi Weynaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba, waa inaysan u dheg taagin baaqyada naf la caariga ah ee danaha qarsooni ku dedadan yihiin ee jiritaanka ummadda Soomaaliyeed lagu lagu qarbudayo.
Aragatida qoraaladan waxaa leh wargeyska ku hadlaa afka DFKMG